Global Voices teny Malagasy » Kaonty Tumblr Iray Nampahamenatra Ireo Fankahalana Antserasera Mikendry Ny Avaratr’i Brezila · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Oktobra 2014 16:52 GMT 1	 · Mpanoratra Taisa Sganzerla Nandika Naomy
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fanoherana, Fifidianana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka
Vehivavy iray avy ao amin'ny fanjakana avaratra-atsinanana ao Piauí. Misy afisin'ilay mpanao politikan'ny Antokon'ny Mpiasa eo am-baravarany. Sary avy amin'i Otávio Nogueira tao amin'ny Flickr. CC BY 2.0
Manangona ireo hafatra mpankahala vahiny navoaka tao amin'ny tambajotra sosialy ny kaonty Tumblr Breziliana iray taorian'ny fahazoan'ny filoha Dilma Roussef hifaninana hofidiana amin'ny fihodinana faharoa.
Nahazo vato marobe tao amin'ny faritra anjakan'ny fahantrana ao avaratra sy avaratra-atsinanana ny kandidàn'ny antokon'ny Mpiasa, izay ahitana ampaham-bahoaka betsaka tao amin'izany faritra izany nahazo famindram-bola sy tombontsoa ara-tsosialy betsaka, tahaka ny “bolsa família”. Nanomboka tamin'ny taona 2006, nopetahan'ireo mpitsikera ny Antokon'ny Mpiasa ho fomba “fividianana ny safidin'ny mahantra” ilay famindrana vola.
Mandrisika ireo mpiserasera mba hametraka fitoriana ireo mandefa fanehoan-kevitra ratsy ao amin'ny biraon'ny lehiben'ny fampanoavana, antsoina hoe Ministeram-panjakana Federaly, ny kaonty Tumblr «Esses nordestinos …» na «Ry zareo Tavaratra-atsinanana” , satria mety azo faritana ho heloka fanavakavaham-pirazanana ny fandefasana fanehoan-kevitra tahaka izany. Taorian'ny fandresen'i Dilma Rousseff tamin'ny taona 2010, niatrika fanenjehana heloka bevava ilay mpianatra lalàna, Mayara Petruso taorian'ny fanehoan-kevitra manavakavam-pirazanana mikasika ny tavaratra-atsinanana nalefany tao amin'ny Twitter. Nahazo sazy an-tranomaizina herintaona sy 5 volana izy tamin'ny taona 2013, saingy nahena ho asam-panasoavana ny fiarahamonina sy fandoavana onitra izany sazy izany.
Namafa ny lahatsoratrany tao amin'ny media sosialy ny maro tamin'ireo mpiseraera izay nohadihadian'ny kaonty Tumblr, saingy naka ny pikantsarin'ireo hafatra manevateva ny «Esses nordestinos …”:
Tokony ao atsimo sy atsimo-atsinanana ihany no tontosaina ny fifidianana.
mampihomehy: Any amin'ny fanjakana izay tena niasa sy mpitarika ara-toe-karem-pirenena (ankoatra an'i Minas Gerais sy Rio de Janeiro) dia resin'i Aécio Neves i Dilma. Nandresy kosa i Dilma tao amin'ireo fanjakana manana taha ambany amin'ny fandrosoan'ny toekarena. Mahatonga ahy hihevitra indray ny hetsika separatista izany. Raha tia fatratra ny «Bolsa Familia» ianao, mahafinaritra, miaraha amin'ny PT [Antokon'ny Mpiasa] sy ny tsy fihetsehana asehony … miankina aminao izany! Eto andrefana-afovoany, miasa izahay mba hahazo izay ho harapaka. Mieritreritra aho fa atao kendaroroky ny tsy fahombiazan'ny toekarena sy ny fahakamoana izahay …
Ny bolsa família , napetraky ny filoha teo aloha Luiz Inácio Lula da Silva tamin'ny taona 2003 dia manolotra amin'ny fianakaviana mandray karama isam-bolana latsaky ny 56 dolara amerikana (tokonam-baravaran'ny fahantrana) vola isam-bolana 13 dolara isan'ankizy tsirairay vita vakisiny latsaky ny 16 taona sy mandeha mianatra (hatramin'ny ankizy dimy), sy 15 isan-tanora 16 na 17 taona mandeha mianatra (hatramin'ny roa). Hoan'ireo fianakaviana manana fidiram-bola isam-bolana latsaky ny 28 dolara kosa (tokonam-baravaran'ny fadiranovana indrindra), ny fandaharam-panjakana bolsa familia dia manolotra “vatsy fototra” 30 dolara isam-bolana ankoatra ireo vatsy efa miampy ireo vatsin'ankohonana omena ny ankizy.
Porofon'ny hantsana ara-toekarena voarakitra hatry ny ela eo amin'i Brezila avaratra sy ny atsimo  izay nihalalina rehefa niala ny tanàna morontsiraka avaratra-atsinanana ny foibe ara-politika sy toekarena ka nifindra tao Rio de Janeiro sy São Paulo tamin'ny fiafaran'ny taonjato faha-19 ireo karazana fanamarihana (fanehoan-kevitra) ireo .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/10/12/64821/
 kaonty Tumblr Breziliana iray : http://essesnordestinos.tumblr.com/
 vato marobe tao amin'ny faritra anjakan'ny fahantrana ao avaratra sy avaratra-atsinanana : http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-10/dilma-ganha-no-norte-e-nordeste-aecio-fica-na-frente-nas-outras-regioes
 niatrika fanenjehana heloka bevava ilay mpianatra lalàna, Mayara Petruso : http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/brazil/8111046/Brazilian-law-student-faces-jail-for-racist-Twitter-election-outburst.html
 hantsana ara-toekarena voarakitra hatry ny ela eo amin'i Brezila avaratra sy ny atsimo: http://frombrazil.blogfolha.uol.com.br/2014/09/23/the-northeast-and-brazils-internal-divide/